✔Mobile Odin Pro v4.20✔ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
✔Mobile Odin Pro v4.20✔
Posted on October 27, 2014 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးFirmware တင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိဖုန်းဟာRoot ကိုအလွယ်တကူလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် မိမိဖုန်းရဲ့ဗားရှင်းကိုပါUpgrade or Downgradeအလွယ်တကူလေးဆင်းနိူင်တက်နိူင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျ။သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်မိမိဖုန်းဟာ Root လုပ်ပြီးသားတော့ဖြစ်ရပါမယ်။ပြီးတော့ မိမိဖုန်းဟာ Android version 2.1 နှင့်အထက်ရှိရပါမယ်။မိမိမှာကွန်ပျုတာမရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေမှာပါ။ဖုန်းနဲ့ပဲ Firmware ကိုဒေါင်းပြီးဖုန်းထဲမှာပဲFirmware ကိုအလွယ်တကူလေးတင်နိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဆော့ဝယ်လေးကိုအသုံးပြုပြီး firmware flash ခြင်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ဖုန်းမှာ flash counter လုံးဝမတက်ပါဘူး။
After flashing official firmware, you will only get SuperSU. You may need to flashaseparate CF-Root kernel to gain CWM Recovery and CWM Manager. You can flash CF-Root using Mobile ODIN like me :)(မိုဘိုင်းအိုဒင်းန် ကိုအသုံးပြုပြီး Firmware Flash လုပ်ပါက Root ကို Auto(Super Su) ရရှိမှာဖြစ်ပြီး .CWM Recovery ကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင် Mobile Odin ကိုအသုံးပြုပြီးတင်နိူင်ပါသည်)
-Apk file size 2.8MB ရှိပြီး
-Android OS version 2.1 နှင့်​အထက်​ရှိ
← ✔Galaxy S4 GT-I9500 Android 4.4.2 KitKat Official Firmware တင်​နည်း✔
✔Huawei Y535D Network Lock✔ →